प्रदेश–४ र सुनको टुक्रा - परिहास - नेपाल
प्रदेश–४ र सुनको टुक्रा
विपक्षी राजनीतिक दल कसैले पनि प्रदेश नम्बर–४ लाई न फलामको टुक्रा बनाउँछु भनेका छन्, न त चाँदीकै । तर, किन हो कुन्नि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो गृहक्षेत्र ४ नम्बर प्रदेशलाई सुनको टुक्रा नबनाई भएन रे ! पोखराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पौडेलले प्रतिपक्षी पार्टीजति सबैलाई विकासविरोधी भनेर ठोकेछन् । पञ्चायतले जस्तै विकासको मूल फुटाउन आफ्नो पार्टी मात्र सक्षम छ भन्ने तफ्वबोध पौडेललाई हुनु आफैँमा युगान्तकारी हुँदै हो । सुनको टुक्रा बनाउने कुराले मतदाता आकर्षित नहोलान् पौडेलजी । सुनको टुक्रामा बसेर के गर्ने चार नम्बर प्रदेशका जनताले ? बरु, पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्नेलाई एक मत एक तोला सुन वितरण गर्ने उद्घोष गरेको भए आकर्षणको काम गथ्र्यो कि !